Iziphuzo eziqhelekileyo zesiGrike, uyazazi zonke? | Ukuhamba kwe-Absolut
Iziselo eziqhelekileyo zamaGrike
UAlberto Legs | | Ihlaziywe 12/07/2018 15:27 | EGrisi
Xa sicinga ngelizwe laseMeditera ukutya okumnandi kunye neziselo ezinxilisayo, IGrisi yenye yeyokuqala efika engqondweni.
Ukondliwa yinkcubeko enxulunyaniswe nomhlaba kunye nokutya kweMeditera okungaze kudanise, ilizwe lamaGrike lihamba ngaphaya kweyogathi yayo yonke, musaka kunye ne-gyros (okanye inguqulelo yalo kebap yasentsomini) xa kufikwa ekunikezeleni izimanga ezinje ngezi zilandelayo iziselo eziqhelekileyo zesiGrike ilungele nawuphi na umsitho, itheko okanye ingokuhlwa yothando phakathi kweelwandle kunye neekholamu.
El I-ouzo liqhekeza elinxilisayo elenziwe kwisitapile kunye nencasa ethile ye-anise. Esona siselo sinxilisayo eGrisi, esihlala sityiwe kwiglasi encinci silandelwe ngomnye umkhenkce ukubuyekeza malunga nama-50 degrees e-distillation enokufikelelwa zezinye iindidi.
Rhoqo bayiphaka ngeplate eneminquma kunye netshizi, nangona ndiqhele ukuyithatha emva kokutya okuninzi kwesiGrike, njengepomace okanye i-anise uqobo. Ngesinye isihlandlo ndiye ndazama ukuyidibanisa ne-champagne cocktail kubungakanani bemizi mveliso kwaye ...
Inguqulelo yomntwana ye-Ouzo yinto efana nale Impendulo yamaGrike kummojito. I-cocktail yehlobo ehlaziyayo eyenziwe nge-ouzo, iswekile, ilamuni, iminti nesoda, nangona abantu abaninzi beyisela ngeCoca Cola.
Isiselo esilungileyo sasemva kwesidlo sasemini emva kwesidlo esimnandi okanye ngexesha lobusuku behlobo kwibhar yaselwandle eMykonos. Kuhlaziya kakhulu.
Imetaxa luhlobo lwe I-cognac yesiGrike yenziwe ngebranti, iziqholo kunye newayini ye-muscat, nangona uninzi lwenza ngaphandle kwesi sithako sokugqibela ukuze usinike incasa eyomileyo. Iiaroma zelaurel roses kunye nesinamon nazo zongezwa, ezongeza umnxeba okhethekileyo kumxube; Iresiphi eyaziwayo ngabambalwa kwaye ayisoloko kulula ukuyithelekelela.
IMetaxá butywala zithunyelwa kumazwe angaphezu kwama-60 ethi yona yahlulwe ibe ziindidi ezintlanu ezahlukeneyo kuxhomekeke ekuvuthweni kwekhompawundi.
La I-retsina yiwayini emhlophe (ngamanye amaxesha ukusuka kwinqanaba le-rosé) elithandayo njenge-pine resin. URetsina ukholelwa ukuba sesinye sezona zidlo zidala eGrisi, ezisusela kwiminyaka engama-2 XNUMX eyadlulayo. Ngapha koko, yaqala ukuveliswa kwiglasi ye-amphorae eyavumela umoya ukuba unxibelelane newayini, enokuyonakalisa.
Ngale ndlela, baqala ukufaka intlaka ngaphakathi kwizikhongozeli, benika iwayini ivumba elahlukileyo ngelixa beyivumela ukuba igcinwe ikwimeko engcono. I-retsina Utyiwa kubanda kakhulu kwimivalo nakuma-tavern kwaye ihlala ikhonjelwa kwimigca ebomvu okanye yegolide ebukekayo.
Ukongeza kwi-retsina, kwilizwe le-Bacchus i-wayini ayiphoxi, ngakumbi xa i-Greece, njengamanye amazwe afana ne-Spain, i-Italiya okanye iLebhanon inezona wayini zibalaseleyo emhlabeni ngenxa yamaqondo obushushu aseMeditera.
Phakathi kweewayini zayo ezininzi, iZitsa, ezivela kumbindi weGrisi, yenye yezona mhlophe zimileyo ezomileyo yelizwe, ngelixa ebomvu iRapsani yenye yeentandokazi.
IPeloponnese ibonelela ngombala osisiqhamo obomvu, iNemea, eyonwabisayo, ngelixa iziqithi zeAegean zinabameli abafana newayini ehlwahlwazayo evela eRhodes okanye iwayini engcwele, emhlophe emhlophe eveliswe eSantorini.
URaki ligama abantu baseTurkey abalaziyo eli tywala ngelixa igama lesiCretan lithi tsikoudia. Imalunga ne isiselo esinxilisayo, ubungakanani be-anise ngokubanzi nge-invoyisi yobugcisa, ukubonakaliswa kokucaciswa kwayo kwizindlu ezahlukeneyo nakwiivenkile zewayini.
Yomelele kakhulu kwaye ukuba sidibana nomGrike, kunokwenzeka kakhulu ukuba basiphathe ngokusela iraki njengophawu lobuhlobo.
Kwi-Absolut Viajes sithethe nawe kwizihlandlo ezininzi malunga ikofu yesiGrike. Yenziwe ngeenkozo ezintle eziphekwe epanini encinci kwaye zongezwa kuzo iikomityi zamanzi, zongeza iswekile xa kuphekwa.
Xa siyicela kwikhefi sinakho icele nokuba iswiti okanye ingenaswekile kwaye baya kusoloko besikhapha ngeglasi yamanzi. Njengoko yenziwe ngqolowa, kuyacetyiswa ukuba uyivumele iphumle okwethutyana.
Nangona amaGrike engaphezulu kweHeineken, Mythos ibhiya kukuphela kwebhiya eveliswa eGrisi. Ikhutshwe kwi-Carlsberg, i-Mythos iqulethe i-5% yotywala kwaye ineengcebiso zeziqhamo. Ayisiyoyona nto uyithandayo emhlabeni, kodwa ityiwa ngokulingeneyo ngabo beza kwindawo yentselo yamaGrike bezama ukwazi ilizwe ngotywala babo.
Ezi iziselo eziqhelekileyo zesiGrikes zondliwa ziincasa zendalo zeMeditera, imifuno yazo kunye nomdiliya omzi mveliso wawo ubuzidibanisa ukusukela ngalaa maxesha xa uBacchus wehlela kwizitiya zakhe ukubhiyozela ubomi kunye neenymphs kunye neentombi. Ukuba uhamba waya eGrisi, ubuncinane uzame i-ouzo, awuyi kudana.
Ngaba ukhe wazama enye yezi igrisi iyasela?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Iziselo eziqhelekileyo zamaGrike
mmmmm… Ndiyazi ukuba mandisele ntoni kwikhefu lam elilandelayo ukuya eGrisi !!!
Molweni zihlobo, kufuneka ndenze umsebenzi osebenzayo kwi-faculty kwaye kufuneka ndenze into efana neGrcia kwaye andazi ukuba ndingayithenga phi, ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba eBuenos Aires kukho indawo abathengisa kuyo izinto zesiGrike?
UJoan Argemi sitsho
Ngaba uyazi apho ndingayithenga khona iRetsina iwayini e-Barcelona?
Phendula kuJoan Argemi
E-Barcelona, ​​unokuzifumana ezi mveliso e-ALFIL GASTRONOMIA, kwisitalato sama-67 se-Asturies, 08012 Barcelona (Plaça del Diamant kwindawo yaseGracia).
Iilwandle ezintle kwiCagagena de Indias